मोडालिटी परिवर्तन : बजार खुला गर्न पाइने , गाडी चलाउन पाइनेकि नपाइने ? हेर्नुहोस – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/मोडालिटी परिवर्तन : बजार खुला गर्न पाइने , गाडी चलाउन पाइनेकि नपाइने ? हेर्नुहोस
मोडालिटी परिवर्तन : बजार खुला गर्न पाइने , गाडी चलाउन पाइनेकि नपाइने ? हेर्नुहोस
रुपन्देहीमा दिनभर व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिएको छ। तेस्रो चरणमा लगाइएको निषेधाज्ञा समयावधि शनिबार राति १२ बजे सकिदैछ। तीन चरणमा २० दिनसम्म लगाइएको निषेधाज्ञामा पनि संक्रमणको ग्राफ बढ्दो छ।
तेस्रो चरणको निषेधाज्ञा अवधि सकिन लागेको दिन रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले दिनभर व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न पाउने गरी चौथो चरणको अगामी भदौ २८ गतेसम्म निषेधाज्ञाको आदेश गरेका छन्।
पन्थले जारी गरेको आदेशमा निषेधाज्ञा अवधिमा अति आवश्यक दैनिक उभोग्य वस्तु र सेवा बिहान ९ बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म संचालन गर्न सकिने उल्लेख छ।
त्यस्तै व्यापार व्यवसाय बिहान ११ बजेदेखि ६ बजेसम्म संचालन गर्न सकिने बताइएको छ। यस्तै भीडभाड नहुने गरी सरकारी कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाले नियमित सेवा दिनसक्ने लगायत आदेश दिइएको छ।
प्रशासनले बजार खोल्न अनुमति दिएपनि मुख्य राजमार्ग र अत्यावश्यकबाहेक सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यातायात संचालनमा रोक लगाएको छ। यस अघि पनि सवारी संचालनमा रोक लगाउने आदेश भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यस पटक पनि कार्यान्वयन नभएमा बजारमा भीडभाड बढ्ने र संक्रमण झन फैलिने सम्भावना छ।
रुपन्देही दैनिक ५० जनाको हाराहारीमा नयाँ संक्रमित फेला परिरहेका छन्। भैरहवा र बुटवल रहेको बजार क्षेत्रमा पनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। संक्रमित फेला पर्ने तर टे«सिङ प्रयाप्त नहुँदा सक्रमण बढ्दो अवस्थामा छ। लाखौँ सर्वसाधरणको स्वास्थ्य सुरक्षालाई नजरअन्दाज गर्दै सीमित उद्योगी व्यावसायीको दबाबमा प्रशासनले बजार खोलेर गल्ती गरेको सरोकारवाला बताउँछन्।
‘संक्रमण केही नियन्त्रणमा आएर बजार खोलेको भए हुन्थ्यो’, भैरहवा क्षेत्रका सितल जिटीले भने, ‘तर, संक्रमण फैलिरहेको अवस्था नै बजार संचालनमा ल्याउने कदम गलत छ।’
उनले संक्रमितले अस्पताल भरिएरमा आईसीयू बेड नपाइरहेको अवस्थामा बजार खोलेर संक्रमणलाई निम्तो दिनु सरह रहेको बताए।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले भीडभाडलाई नियन्त्रण गर्न सवारी साधन संचालनमा रोक लगाएर व्यापार व्यवसाय संचालनको अनुमति दिइएको बताए। उनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर सबैले काम गर्नुपर्ने बताउँदै आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गरिने बताए।
सर्लाहीको हरिपुरको जंगलमा पोखरी ख’न्दा भेटियो शिवलिं’ग, शिवलिं’ग हेर्नेको लाग्यो भिड
कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेका ४५ हजार नेपाली स्वदेश फर्किए
सोमबार ४ सय १८ नयाँ संक्रमित भेटिए